အင်္ဂ ါဂြိုလ်ပေါ်မှာ မြေဝယ်လို့ရပြီ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အင်္ဂ ါဂြိုလ်ပေါ်မှာ မြေဝယ်လို့ရပြီ…
အင်္ဂ ါဂြိုလ်ပေါ်မှာ မြေဝယ်လို့ရပြီ…
Posted by kai on Apr 22, 2016 in Contributor, Columnist, Myanmar Gazette, News | 13 comments
ခုလောလောဆယ်… တဧက ၃၅ဒေါ်လာတန်ကို.. ၉ဒေါ်လာနဲ့ရောင်းနေပါတယ်..။
ဝယ်လို့ရှိရင်.. ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်နေရာရှိရာ မြေတိုင်းမြေပုံ။ ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်၊ NASA ကရိုက်ယူထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံစာအုပ်နဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ရမယ်ဆိုပဲ…။ smile emoticon
Buying land on Mars sounds likeaplot line in some futuristic sci-fi flick about billionaires. In truth, it’samodern-day possibility for thousandaires. Buy Planet Mars gives astrophiles the chance to buy one acre of land on the Red Planet. Much like the purchase ofastar, Martian Land Packages includeamap charting your acre’s location, an owner’s deed,aNASA report on Mars exploration, andaphoto eBook. These packages are issued digitally, meaning they’re available for download immediately after purchase.
သဂျီးမနောက်နဲ့ဗျာ
ဝယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားပြီး ဘယ်လိုနေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရမှာလဲ
ဒီကမ္ဘာမြေမှာ ခိုင်မာတဲ့ငွေကြေးပိုက်ဆံဆိုတာကို စပြီးလုပ်တဲ့လူမျိုးစုက.. အခုပလာအူကျွန်းစုနေ ယက်ပ်လူမျိုးစုဗျ..။ သူတို့က ငွေဆိုပြီး.. ကျောက်သားထုကို အဝိုင်းပုံထု.. အပေါက်ဖောက်ပြီးသုံးတာ..လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀၀ဝ မကကတည်းကတဲ့..။
ဥပမာ..။အိမ်ဝယ်မယ်ဆို.. အိမ်တလုံးအဲဒါတခုပေါ့..။ ရောင်းတဲ့သူဆီကို ..အဲဒီပိုက်ဆံကြီး ဝိုင်းထမ်းပို့လိုက်ရော..။
နောက်ပိုင်း.. ကျွန်းစုအချင်းချင်း.. အရောင်းအဝယ်လုပ်တာမှာလည်း.. လှေနဲ့သယ်ရင်း.. ပင်လယ်ထဲကျသွားတာတွေရှိတယ်..။
သူတို့အတွက် ပြဿနာမရှိ..။ ပင်လယ်ထဲကျနေတဲ့ အဲဒီကျောက်ဝိုင်းကြီးကိုညွှန်းပြီး ငါ့ဟာ.. သူ့ဟာနဲ့..အဖိုးဟာ..အဖေဟာဆိုပြီး ဆက်ရောင်းဝယ်တာပဲ..။
အဲဒီစနစ်ဟာ.. ဒီခေတ်.. ဘဏ်နဲ့ချက်လက်မှတ်တို့ရဲ့မိခင်စနစ်ပဲ..။
အဂ င်္ါဂြိုလ်မြေဂရမ်ကွက်နဲ့ ဘာလုပ်စားလို့ရတယ်ဆိုတာ..။ ကြယ်ကိုလက်ညိုးလှမ်းထိုးပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်ပေါ့…။
အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့ ငွေကြေးစနစ်တည်ဆောက်လို့ရတယ်… လို့..။
နောင်ဘဝမှာ.. သာဝတိ ံသာမှာ.. နတ်သားဖြစ်မယ်.. နတ်သမီး ၅၀ဝစီရမယ်ထက်တော့ အမာျးကြီးပိုသေချာတာပဲလေ..။
အဲဒီလို မသေမချာကြီးကိုပြောနေတဲ့.. ငရဲပြည်နတ်ပြည်ပွဲစားဘုန်းဘုန်းတို့ဆီ.. ငွေသန်းချီလှူတယ်ဆိုပြီး.. ပေးပစ်နေတာမဟုတ်လား..။
ကိုရင်တောင် အခုအသက်ထိ.. ပေးဖူးငွေ.. ဒေါ်လာ ၁၀ဝဖိုးမက ရှိလောက်တယ်.။
လူဒွေ သင်္ကေတနဲ့ပိုက်ဆံအကြောင်းပြောချင်ရင်
လက်ညှိုးနဲ့လက်မ ဝိုင်းပြတာ ဒကြောင့်ကိုး
မီးလဲမလောင် ရေလဲ မပျော် အလွယ်ခိုးလို ့လဲ မရ ခင်းပြီး အိပ်လို့ လဲရ ကာလို ့လဲရ ဂွတ်ထ
ဒီခေတ်ထိရှိနေရင် ငွေတိုး ဘယ်လိုပေးစားကြမလဲမသိ
တဂျီးက ဘီယာဆိုင်ဖွင့်ဖို့ ဘယ်နှဧကလောက် ဝယ်ထားပြီးပြီလဲ?
ဂြိုလ်တစ်ခုလုံးတောင် မြန်မာပြည်တစ်ယောက်ဝယ်တာနဲ့တင် ကုန်လောက်တယ်။
သန်ဆင်ခိုင်နဲ့ နီးဖို့ အမှေ ျာ်မြင်ကြီးစွာနဲ့ အင်္ဂါဂြို်လ်ပေါ် မြေတဂွက် ဝယ်မည်။
လော့ဒ်ကြောင်ဂျီး ဖြစ်ချင်ရင် စကော့တလန်မှာ ဝယ် ပါလား ကြောင်ကြောင်။
စကော့တလန် မှာ ပေါင်၃ဝ ပေးရင် မြေ ပေါက်စ တစ်ကွက်ရတယ်။ Lord or Lady နာမည်ခံလို့ ရသပေါ့။
When you buy your gift-pack from Highland Titles, you will obtainapersonal right to your plot of land, complete withaprecise Ordnance Survey grid reference. Whilst people are free to refer to themselves as Lairds, it is only those who own land in Scotland that haveagenuine reason to do so.
ငွေစက္ကူတွေကို.. ရွှေအပေါင်ထားပြီး ထုတ်တာထက် ပိုခိုင်မာတဲ့နည်းပဲ..။
သေသေချာချာစဉ်းစားပြီး.. မြန်မာပြည်က မြေတွေကို.. အဲလိုလုပ်သင့်တယ်..။
တကယ်ပါ.. ခုချိန်မှာ အလိုချင်ဆုံးကို ပြောပါဆိုရင် ရန်ကုန်မှာ ကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့ကိုယ် နေချင်တာ.. လောလောဆယ် အိမ်ပိုင်မဟုတ်သေးတောင်.. ခဏခဏမပြောင်းရဘဲ ငှားနေလို့ရမယ့်အခြေအနေလေးပေါ့.. ကိုယ့်လစာရဲ့ တစ်ဝက်နီးပါးလောက်ကို အိမ်ငှားနေဖို့ မသုံးနိုင်သေးသလို… (၆) လတစ်ခါ ငွေအလုံးအရင်းကြီးပေး.. (၆) လပြည့်တော့ ထပ်မငှားတော့လို့ပြောင်း ဆိုတာကလည်း ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးကိုး… အိမ်တစ်အိမ်မှာ မိန်းကလေးရွယ်တူတွေချင်း (၇) ယောက်လောက် စုနေတာကျတော့လည်း အင်မတန်စကားပြောရတာမို့လား..
ဆိုတော့ မကြာခင် အိမ်ဈေးတွေကျလာပါစေလို့ပဲ… မျှော်လင့် မျှော်လင့်..
အဲ့ကိုရောက်ဖို့ မနည်းသွားရဦးမှာ။ အင်္ဂါဂြိုလ်မှာတော့ မနေချင်ဘူး။